Indlela Engcono Kakhulu Yokuphatha Ama-akhawunti E-Twitter Amaningi Martech Zone
ULwesine, April 7, 2016 ULwesine, April 7, 2016 Douglas Karr
Ngicela ungitshele ukuthi usajabula kuTwitter… Ngiyayithanda ipulatifomu futhi mhlawumbe ngizohlala njalo. Lokho kusho, ngilwe kanzima izinyanga ngohlelo oluzenzakalelayo lwe-Twitter desktop ye-Mac. Isistimu yami ibizonciphisa ukukhasa, kanti ne-Twitter izogcina ingasabeli. Ngicabanga nje ukuthi onjiniyela nabantu be-QA abahlola uhlelo lokusebenza abanabalandeli abaningi nezibuyekezo eziningi usuku lonke njengoba ngenza.
I kwaba usebenzisaI-Hootsuite kepha bekungekuhle kangako. I-interface yomsebenzisi incanyana, futhi angikholwa ukuthi isikhala sihlelwe kahle phakathi kwama-tweets, ngakho konke kubonakala kufiphele. Futhi ngiyathanda ukuba nohlelo lokusebenza luvuleke kunesiphequluli ngoba ngivame ukuvala isiphequluli ngengozi.
Ngemuva kweminyaka ngingayisebenzisi, nginqume ukulanda TweetDeck bese uzama futhi. Ngaphesheya kokushicilelwa kwethu, incwadi yami, umcimbi ozayo, nezinkundla zethu ze-imeyili, ngiphatha ama-akhawunti ayisishiyagalombili. Yebo, bekuyiphupho elibi… kuze kube manje!
Izici ze-Akhawunti Eziningi ze-TweetDeck Zibandakanya:
Gada ama-timeline amaningi ku-interface eyodwa elula.
Hlela amaTweets azothunyelwa ngokuzayo.
Vula izexwayiso ukuze uhambisane nolwazi oluvelayo.
Hlunga usesho ngokususelwa kunqubo efana nokubandakanya, abasebenzisi nohlobo lokuqukethwe.
Yakha futhi uthumele isikhathi senkambiso ongasifaka kuwebhusayithi yakho.
Sebenzisa izinqamuleli zekhibhodi enembile ukuze uzulazule kahle.
Thulisa abasebenzisi noma imigomo ukuqeda umsindo ongafuneki.
Ungalokothi ushaye ukuvuselela futhi: Ukusakazwa kwezikhathi ze-TweetDeck ngesikhathi sangempela.
Khetha itimu ekhanyayo noma emnyama.
TweetDeck Ngisho Kuhlanganisa Team Management!
Mhlawumbe isimanga esikhulu uma kukhulunywa ngeTweetDeck yilokho ukuphathwa kweqembu yakhiwe ngqo kuhlelo lokusebenza! Ngikwazi kalula yabelana ngama-akhawunti phakathi kwamalungu eqembu ngaphandle kokukhokha imali ngayinye yelayisense yomsebenzisi noma, okubi kakhulu, ngeplatifomu yokuphathwa kwezenhlalo. Ngimane ngivule ukusethwa kwethimba bese ngifaka ama-akhawunti e-Twitter nokuthi ngabe azomane nje athumele i-akhawunti ngaphandle noma abelane ngobunikazi!
Kukho konke ukwethembeka, ngikholwa ukuthi i-Twitter kufanele ithathe umhlalaphansi kuhlelo lwayo lwe-desktop OSX futhi inikeze i-TweetDeck esikhundleni salokho. Kusebenza ngokungenaphutha. Anginaso isiqiniseko sokuthi lokho kuzokwenzeka, nokho, ngoba ngenyanga edlule iTwitter yamemezela ukuthi kwakwenzekile ukuvala inguqulo yeWindows, edinga abasebenzisi beWindows ukungena ngemvume kuhlelo lokusebenza lewebhu esikhundleni salokho.
I-TweetDeck isatholakala njenge- Uhlelo lokusebenza le-Chrome futhi Uhlelo lokusebenza lwe-Mac okwamanje. Kubonakala sengathi uhlelo lweWindows beluthathe umhlalaphansi ngoba bekungelula phatha imininingwane ye-Twitter kahle.
Sicela uzame i-TweetDeck uma uku-Mac bese ukhombisa uhlelo lokusebenza uthando oluthile kuzilinganiso ze-App Store! Ngenzile!
Tags: phatha ama-akhawunti amaningi we-twitterTweetdeckTwitterukuphathwa kwe-twitterukuphathwa kweqembu le-twitter
Ngo-Apr 7, i-2016 ku-9: 25 AM
Ngiyavuma! Kimi, i-Twitter iyinkundla yokuxhumana engasebenziseki kalula. Ngisanda kuqala ukusebenzisa i-TweetDeck futhi, futhi ngiyithola iyisebenziseka kalula. Siyabonga ngokwabelana!